टिकटक लाइभले जन्मायो ‘भिखारी सेलिब्रेटी’ – Sandes Post
March 30, 2022 1856
कहिल्यै भिखारीले जेट र गोल्डेन कार मागेको सुन्नु भएको छ ? यदि, छैन भने तपाईं टिकटक चलाउनु हुन्न भन्ने प्रष्ट हुन्छ । लाग्छ, कुनचाहिँ भिखारीले यस्तो महँगो सामान माग्छ ? तर, भिखारी सेलिब्रेटीले माग्छन् ।
आखिर त्यो भिखारी सेलिब्रेटी को हो ? भिखारी सेलिब्रेटीका कुरा गर्नुअघि विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै लोकप्रिय बनेको सामाजिक सञ्जालको कुरा गरौँ ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल एक प्रकारका व्यक्तिका लागि जीवनकै अभिन्न अंगजस्तै भएको छ । युवामात्र नभई बालबालिका र प्रौढ अवस्थाका पनि सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त भइरहेका छन् ।
सुरूमा यसमा १५ सेकेन्डको मात्रै भिडियो बनाउन मिल्थ्यो । लोकप्रियता बढेसँगै फिचरहरू थपिँदै गए । अहिले पाँच मिनेटसम्मको भिडियो बनाउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी अहिले लाइभ बस्ने सुविधा समेत छ । निश्चित संख्यामा फ्लोआर भएपछि प्रयोकर्ता टिकटकमा लाइभ बस्ने र गेम खेल्ने सुविधा छ ।लाइभ बस्नेलाई अरु प्रयोगकर्ताले गिफ्ट दिन मिल्छ ।
लाइभका बेला अरू प्रयोकर्ताले दिएको गिफ्ट अन्ततः डलरमा रूपान्तरण गर्न मिल्छ । त्यसैले अहिले यसलाई धेरै प्रयोगकर्ताले आयआर्जको स्रोत बनाउँदै लगेका छन् ।
टिकटकबाट एक–दुई जनाले टन्नै पैसा कमाए भन्ने सुनेर अहिलेका युवापुस्ता त्यसैमा लागिपरेका छन् । टिकटकमा हिट हुने, आफ्नो फ्लोअर बढाउने, लाइभ बस्ने र पैसा
कमाउने भोकले धेरैले अनेक हरकत गर्न थालेका छन् । गुणस्तरहीन, अश्लिल पोस्ट गर्ने र लाइभमा अस्वाभाविक गतिविधि गर्नेको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् ।
‘भाइरल बन्ने मोह’ले धेरैलाई गाँजेको छ । टिकटक प्रयोगकर्ताले अनेक तिकडम गर्न थालेका छन् । अरूको चरित्रह’त्या गर्ने, अ’श्लि’ल भिडियो बनाउनेको भीड बढ्दै छ । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई ज’बर्ज’स्ती टिकटकमा प्रदेश गराइँदै छ ।
भाइरल हुने चक्करमा जस्तोसुकै जोखिम मोल्नसमेत तयार हुन्छन् । यीमध्ये कसैको मृ’त्युसमेत भएको पाइन्छ । सेती नदीमा टिकटक बनाउँदा एक युवतीको मृ त्यु र दाङका एक युवा झोलुंगे पुलबाट खसेर मृ त्यु यसैको उदाहण हुन् ।
टिकटकमा लाइभ बस्नेले पैसा कमाउन थालेको धेरै भएको छैन । केही महिना अघिदेखि मात्रै यसको चर्चा चल्न थालेको हो । अहिले टिकटक लाइभमा बसेर लाखौँ,
करोडौं कमाएका हल्लाहरु सुनिन्छ । टिकटक लाइभबाट घर, गाडी र जग्गा किनेँ भनेरसमेत युट्युबमा अन्तवार्ता दिँदै हिँड्ने भेटिन्छन् ।
लाइभ बसेर एकैदिन चार–पाँच लाख कमाइ हुने उनीहरूको दाबी छ । दिनको सात–आठ घन्टा लाइभमा बस्दा महिनामा २५ देखि २६ लाख कमाइ हुने उनीहरूको
अन्तर्वार्तामा सुन्न सकिन्छ । उनीहरूलाई सेलिब्रेटी भनेर सम्बोधन गरिन्छ । जसको धेरै फलोअर, उनै ठूलो सेलिब्रेटी ! उनीहरू आफैंलाई सेलिब्रेटी ठान्छन् !
टिकटक स्टार सेलिबे्रटी नै हुन् । मजस्ता एक–दुई जनाले सेलिब्रेटी नमाने पनि लाखौँले मानेका छन् । तर, ती सेलिब्रेटीको सबैभन्दा ठूलो काम हो– टिकटकमा लाइभ बस्ने अनि गिफ्ट माग्ने ।
उनीहरू कुनै राम्रो काम गरेर सेलिब्रेटी भएका होइनन्, अनेक हर्कत गरेर बनेका हुन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको लाइभ बसेर गिफ्ट माग्ने अनि पैसा कमाउने । अर्थात उनीहरू भिखारी सेलिब्रेटी हुन् ।
आफ्नो फलोअर एक हजारभन्दा बढी भएपछि लाइभ बस्न मिल्छ । टिकटक लाइभ हेर्ने दर्शकले इमोजी उडाएर गिफ्ट पठाउन मिल्छ । गिफ्ट पठाउन क्वाइनले किन्नुपर्छ ।
त्यसपछि गिफ्ट पठाउन सकिन्छ । अरुले पठाएको गिफ्टबापत लाइभ गर्ने ब्यक्तिको खातामा पैसा आइरहेको हुन्छ । त्यसरी लाइभ गर्ने भिखारी सेलिब्रेटी बढ्दै गएका छन् ।
त्यसैले भन्ने गरिन्छ– ‘धनभन्दा मन ठूलो’ । तर, अर्काको देशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा ‘मेरो मुटु, मेरो धड्कन’ भन्दै दिनेको मनचाहिँ कत्रो होला ?
घरमा दमले बुढा बा–आमा बोल्न नसकिरहेको बेला ‘मेरो नाकमा ट्यापट्याप गर्नुहोस्’ भन्नेलाई आफूले पसिनासँग साटेको पैसा पठाउने युवालाई चाहिँ मान्नैपर्छ ।
केही समयअघि धनगढीका अंशु बर्माले टिकटकमा लाइभ बसेर एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको भन्दै केही युट्युबरलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।
त्यस्तै, काभ्रेकी मन्दिरा ढुंगानाले पनि ‘टिकटक लाइभबाट महिनामा ७०–८० लाख कमाएँ’ भनेर युट्युबरलाई अन्तर्वार्ता दिएकी छिन् ।
बर्माको अन्तर्वार्तापछि धेरै कलाकार लाइभमा बस्न थाले । ठूलो पर्दामा गनिएका कलाकार पनि टिकटक लाइभमा देखिन थालेका छन् । अभिनेत्री वर्षा राउत,
कलाकार तथा फिल्म निर्माता जयकिसन बस्नेत, गायिका रचना रिमाल, एलिना चौहान, समीक्षा अधिकारी, प्रताप दास, सागर आलेसमेत लाइभमा बस्न थालेका छन् ।
टिकटकमा लाइभ बस्नेहरूलाई गिफ्ट दिनु तपाईंको इच्छाको कुरा हो । तर, आफूले विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाएर कमाएको डलर केही फलोअर्सको
लोभमा गिफ्ट पठाउनु कतिको बुद्धिमानी हो ? त्यो सोच्ने जिम्मा तपाईँ आफ्नै हो । माग्नेहरूलाई पनि लाग्नुपर्ने हो– माग्नु आत्महीन कर्म, स्वाभिमानको अपमान ।
Prevकम पैसामा जुनसुकै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने टेलिकमको नयाँ भ्वाइस प्याक
Nextयिनै हुन् आज बिहान बाबासँग बिद्यालय जादै गर्दा टिपरले कि’चेर मा’रेका श्रेया र सृष्टि